Alatsinainy Desambra 13, 2010 Sabotsy, Oktobra 29, 2011 Bill Dawson
Androany no manamarika ny beta ampahibemaso ho an'ny fitaovana vaovao ho an'ireo mpivarotra mailaka sy ekipa mpamorona, Emailium, angon-drakitra fanentanana amin'ny marketing amin'ny mailaka. Ity rindranasa an-tserasera ity dia manao lisitra ny mailaka ampahibemaso ary mandamina azy ireo amin'ny alàlan'ny Indostria, orinasa, na marika nofaritan'ny mpampiasa.
Ahoana no mety hampiasana anao ity serivisy ity? Andao hijery scenario vitsivitsy:
Ekipa mpamorona - Rehefa terena fomba vaovao ianao, na afangaro amin'ny sakana famoronana atahorana, ny ekipa mpamorona dia afaka mitady aingam-panahy ao Emailium. Mikasa ny hanavao ny mailaka fialantsasatrao? Sivano ny fanangonana araka ny loko sy ny fari-daty hahitanao izay ataon'ireo hafa ao amin'ny indostriao.
Mpamatsy tolotra mailaka (ESP) - Mahaliana ny zavatra ataon'ny ESP hafa amin'ny horonan-tsary, fizarana ara-tsosialy, na fisehosehoana amin'ny mailaka? Emailium dia manana tahirin-tsoratry ny daholobe amin'izao fotoana izao, izay mamela ny fanasokajiana isaky ny ESP lehibe, hahafahanao manadihady.
mpivarotra - Manandrana mamantatra ny fomba fampidirana ilay bokotra "tiako" ao amin'ny Facebook, na andalana inona amin'ireo lohahevitra mety hahazo valiny tsara kokoa? Sivano amin'ny alàlan'ny indostria na andalana ny lohahevitra ary zahao ireo mailaka mpifaninana aminao.
Retailer - Inona no ataon'ny mpifaninana amin'ny fihenan'ny ora fialantsasatra? Fantatrao izao - manivana ny fanangonana amin'ny alàlan'ny indostria ary ny datin'ny datin'ny fialantsasatra.
Visit Emailium.com raha mila fanazavana fanampiny, ary misoratra anarana ho an'ny beta.
Ahoana ny famelana ny mpanjifa hitarika ny fanentanana anao manaraka
26 Jan 2017 amin'ny 3:03 PM
Salama Bill, nieritreritra aho fa mety hahaliana ny manamarika fa Emailium izao dia serivisy maimaimpoana amidy eo ambanin'ny marika Email Creative Archive: https://www.freshaddress.com/eca/home.cfm